Xog: Laba arrin oo sababay dagaalkii Puntland iyo R/W Kheyre ee W/Gaalkacyo - RajoQaran News Around The World
RajoQaran News Around The World
Home WARARKA Xog: Laba arrin oo sababay dagaalkii Puntland iyo R/W Kheyre ee W/Gaalkacyo
Xog: Laba arrin oo sababay dagaalkii Puntland iyo R/W Kheyre ee W/Gaalkacyo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa dhowaan ka baaqday Munaasabad ka dhici laheyd Madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ee dhanka Puntland, waxayna arintaasi dhalisay buuq badan iyo qayla dhaan ka soo baxday maamulka Puntland.
Rajoqaran Online ayaa ogaatay in laba arrin ay sababtay ka baaqashada munaasabadii ay soo qaban qaabiyeen Golaha Wasiirada ee Puntland taas oo ka dhici laheyd Madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug.
Puntland ayaa marka hore dood gelisay socdaalka Ra’iisul Wasaaraha ee Waqooyiga Gaalkacyo, iyagoo ku sheegay in Kheyre uusan u imaanin Puntland balse uu u yimid Shacabka Galmudug islamarkaana looga baahan yahay in uu ka laabto Koonfurta Gaalkacyo.
Puntland waxay u aragtay in Kheyre uu booqday labada dhinac ee Gaalkacyo mid Galmudug u marqaati fureysa lahanshiyaha Guud Gaalkacyo kana saareysa wararka sheegay in Galmudug ka kooban tahay Gobal iyo Bar.
Madaxweyne Deni ayaa dalbaday in Kheyre marka hore yimaado Garowe kadib loo ogolaado Waqooyiga Gaalkacyo si socdaalka Puntland uga soo bilaawdo Garowe balse dood dheer kadib waa la isku fahmi waayay.
Puntland waxay ogolaatay in Ra’iisul Wasaaraha yimaado Waqooyi Gaalkacyo balse waxay sharuud kaga dhigtay in uu odayaasha dhaqanka kula hadlo Madaxtooyada Gaalkacyo iyo in Dhalinyarada kula hadlo Garoonka Kubadda Cagta ee Gaalkacyo balse saacadihii dambe ee maalintii uu tagi lahaa Gaalkacyo ayaa xaaladda is badashay.
Kooxda qaban qaabada Socdaalka Ra’iisul Wasaaraha iyo hey’adaha ammaanka ayaa Wasiirada Puntland waxay ku wargeliyeen in magaalada Gaalkacyo ay soo galeen 2 Gaari oo qaraxyo ah sidaas darteed uu Ra’iisul Wasaaraha tagi karin Garoonka oo ay ku diyaarsanaayeen Dhalinyaro reer Gaalkacyo ah.
Kheyre ayaa Ciidamadii la socotay ku amray in ay la wareegaan amaanka Garoonka lagana qaado kuwada Puntland islamarkaana la xiro dhamaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa waxaana sidaas sameeyay Ciidamadii gaarka ahaa ee Ra’iisul Wasaare Kheyrre.
Ogolaansho la’aan ayuu Xasan Cali Kheyre galay Waqooyiga magaalada Gaalkacyo islamarkaana kula hadlay dhalinyaradii ku diyaarsaneed Garoonka kubadda Cagta ee Gaalkacyo.
Digniin amni oo siyaasadeysan oo ay saareen Wasiirada iyo Saraakiisha amaanka Puntland
Iyo Maamulka Puntland oo diidanaa in Kheyrre booqdo Waqooyiga Gaalkacyo isagoo aan soo marin Garowe ayaa sabab u ahaa in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre Waqooyiga Gaalkacyo ku galo qaab aysan rabin Puntland.
Puntland waxay xoog badan gelisay in aysan is arkin Kheyre iyo dhalinyarada hadii uu soo booqdo Waqooyi Gaalkacyo iyadoo ka door bideysay in uu la kulmo dhaqanka maadaama aysan dhalinyaro ka hadli doonin rabitaanka Puntland balse ay aaminsanaayeen in ay ka hadli doonaan rabitaankooda oo kaliya, taasi oo ay ku guul-darreysatay.
Previous articleC/raxmaan C/shakuur oo Saddex qodob ku soo koobay sababta ay u sii jiraan Al-Shabaab
Next articleWasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo Bangiga Horumarinta Afrika kala hadlay arrimaha deyn cafinta
AMISOM oo shaacisay in dishay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwa kelana ay nolosha ku qabatay
Guddoonka labada gole ee BF oo bilaabay qorshe aysan raali ka aheyn Villa Somalia
Maxaa ka jira in Ducaale loo wado madaxweynaha cusub ee maamulka HirShabeelle?